यस्ता प्रहरी जवान जसले फिर्ता गरे भेट्टाएको ५ लाख • Nepal's No. 1 Digital News Paper .
यस्ता प्रहरी जवान जसले फिर्ता गरे भेट्टाएको ५ लाख
झापा । केही घटना हेर्दा लाग्छ । यहाँ इमान मरेको छैन । विभिन्न घटनाले दरिद्रता बढ्दै गएको हो की भन्ने लागिरहेका बेला फेरी केही घटनाले नेपाली समाजलाई आशाको दियो जगाईदिन्छ । यस्तै पात्र हुन् इलाका प्रहरी कार्यालय, सुरुङ्गाका प्रहरी जवान अमृत ठान्दार । जसले भेट्टाएको पाँच लाख रुपैयाँ फिर्ता गरे । झापाको कनकाई नगरपालिका–३, सुरुङ्गामा डियुटीमा खटिएका जवानले सडकको छेउमा झोला भेटेका थिए ।
झोला भेट्टाउने वित्तिकै उनले इप्रकामा जिम्मा लगाएका थिए । प्रहरीले झोला पैसा देखेपछि धनीको खोजी गर्दै टिकट काउन्टर, काँकरभिट्टासम्म पुगेको थियो । त्यहाँ पत्ता लाग्यो की ६ दिन पहिले बस दुर्घनाको क्रममा कसैले झ्यालबाट झोला फालेका थिए । त्यो आपतमा झोलाको कसैले खोजी गरेन । ६ दिनपछि दुर्घटनाबाट घाइते भएका बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–६, बुर्तीवानका मानबहादुर कुमाईको झोला भएको पत्ता लाग्यो । घाईते कुमाईलाई ५ लाख ४० हजार रकम सहितको झोला प्रहरीलेब बुझायो । उनी खुशीले दंग परे ।
नगद हस्तान्तरण गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय, सुरुङ्गाका प्रमुख प्रदिपकुमार सिंह क्षेत्रीले प्रहरीले भेटिएको रकम सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाएर कर्तव्य पालना गर्न पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । कार्यक्रममा वडाअध्यक्ष रुद्रप्रसाद चिमरिया, सम्बन्धित नगद धनी मानबहादुर, कनकाई उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष मिनाल तिम्सिना लगायतले देशमा नैतिकता सकिँदै गएको वेला प्रहरी जवानले नमूना पेश गरेको बताए ।